Warbixin Hay'adda isku dubba ridka hawlaha gargaarka ban'aadanimo ee Soomaaliya, OCHA - BBC Somali
Warbixin Hay'adda isku dubba ridka hawlaha gargaarka ban'aadanimo ee Soomaaliya, OCHA
Image caption Abaaraha Soomaaliya ku baahay
Xafiiska UN ee xidhiidhinta gargaarka banii'aadminnimada ee Somalia ee OCHA, warbixin uu ka soo saaray abaaraha gobolkaasi ayaa aad uga digeysay biyo la'aan iyo baad yaraan kahatar ku geeni kartaa nolosha reer miyiga iyo xoolaha, xilligani jiilaalka.
Warbixintu waxay sheegtay in durba abaaruhu ay saameeyeen degaanno badan oo ka mid ah Somaliland, Puntland iyo sidoo kale qaybo ka mid ah gobollada koonfureed iyo kuwa dhexe ee iskahorimaadyada ka jiraa ay xannibeen waxqabadka bani'aadamnimada, taas oo ka dhalatey welwel laga qabo dhinaca ammaanka.
Degaannada welwelka ugu weyn laga qabo waa degaannada ay horeyba uga jireen dhibaatooyinka oo ay saameeyeen dadweyne gaadhayaa ilaa 2 milyan oo qof. Awoodda ay dadku u leeyihiin in ay u adkeystaan dhibaatooyinka hadda jira ayaa horeba u baaba'dey, waxaana xilliga jiilaalka ahi uu noqon doonaa mid uga sii dara xaaladda.
Degaanno kale oo dhibaatooyin ay ka jiraan ayaa ay u badan kuwa beerleyda ah ee koonfurta iyo dadka Xoolo dhaqatada ee ku nool Jubbooyinka, kuwaasi oo weliba u sii nugul dhibaatooyinka roob-yarida, maadaama noloshoodu si weyn ugu tiirsan tahay dalagga beeraha.
Qiimaha badarka ayaa gobollada qaar sida Bakool iyo Hiiraan uu durba kor u kacayaa, iyada oo ganacsatadu ay xayirayaan raashinka, iyaga oo ku xisaabtamaya in dalag yar uu soo go'i doono.
Daraaso lagu sameynayo saameynta xilligan jiilaalka iyo abaarta ayaa hadda ka socota degaammada gobolladaas. Warar hordhac ah iyo sidoo kale saadaasha digniinta hore ayaa tilmaamaya in gobollada Bari, Mudug, Hiiraan, Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose, Jubbooyinka, Gedo, Sool, Sanaag iyo Nugaal ay yihiin gobollo durba loo baqayo. Xoolo-dhaqatada ku nool gobolladaa ayaa bilaabey in ay u guuraan meelo ku dhowdhow magaalooyinka iyaga oo biyo u raadsanaya xoolahooda.
Iyada oo roobabka dayrtu ay aad u yar yihiin, lana saadaalinayo abaar, ayaa heyadaha gargaarku ay horeba u sii diyaarisey kooxo-hawleed oo wax ka qabta abaarta. Qaybaha beeraha & xoolaha, fayadhowrka iyo nadaafadda biyaha ayaa diyaariyey warbixinno ay kaga hadlayaan xaaladaha haatan taagan.
Xafiiska xidhiidhinta ee heyadahaasi gargaarka ayaa lacag dhan ilaa $4.5 malyan oo doollar u diyaariyey sanduuqa gargaarka bani'aadamnimada ee wadajirka ah ee loogu talogaley xaaladaha degdegga ah, si looga hortago saamaynta abaarta.
Warbixinta OCHA waxay sheegay in gargaarkaasi wax-ka-qabadka saamaynta abaaraha, in mudnaanta la siinayo waqtigan la joogo dhinacyaa Xoolaha, Beeraha iyo Fayadhowrka iyo Nadaafadda Biyaha.